Etu ibudata Daemon Ngwaọrụ n'efu | Gam akporosis
Ignacio Sala | 11/07/2021 18:00 | Emelitere ka 16/07/2021 00:32 | Ngwaọrụ ndị ọzọ, Nkuzi
Ọ bụ ezie na ọtụtụ akụrụngwa kọmputa, ma desktọọpụ ma obere, etinyekwaghị ihe ọkpụkpọ DVD, a ka na-eji usoro a n'ọtụtụ ebe n'etiti ụfọdụ ụlọ ọrụ na ọkachasị n'etiti ọtụtụ ndị ọrụ.
Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ oge niile ma ọ bụ oge ụfọdụ na usoro nchekwa a, enwere ike ịmara ngwa ngwa Daemon, otu n'ime ngwa kacha mma iji mepụta ma weghachite onyonyo n'ụdị ISO, ezigbo ngwa iji mee nkwado ndabere nke ọdịnaya anyị bara uru.
1 Kedu ihe bụ Daemon Tools
1.1 Ike Daemon Ngwaọrụ
2 Kedu ihe anyị nwere ike iji Daemon Ngwaọrụ
2.1 Dezie ọdịnaya nke ihe oyiyi ISO
2.2 Ike Virtual Drive
2.3 Onye mbido ISCSI
2.5 Njikọ Windows
3 Etu ibudata Daemon Ngwaọrụ n'efu
4 Ihe ndi ozo di na Daemon Tools
Kedu ihe bụ Daemon Tools
Daemon Ngwaọrụ bụ otu n'ime ngwa zuru oke ugbu a dị na ahịa ma a bịa n'ịrụ ọrụ Kpọmkwem mbipụta nke ọdịnaya echekwara na nkịtị media dị ka CD na DVD. Ọ bụ ezie na nkwupụta ahụ gosipụtara na mbido nke oge nkwado anụ ahụ a dị elu karịa nke diski ike, ọ dịghị ihe ọzọ karịa eziokwu.
O di nwute, usoro a egosiputa bụrụ nke dị oke ala ha na-agbachapụ ngwa ngwa, yabụ na anyị nwere ike tufue ọdịnaya echekwara ngwa ngwa na n’amaghị ama. Na mgbe m kwuru ida ọdịnaya, ana m ekwu na anyị ga-efunahụ ya ruo mgbe ebighi ebi, ebe ọ bụ na iweghachite DVD mebiri emebi enweghị ike ọ gaghị ekwe omume.
Nke a bụ ebe Ngwa Daemon bụ ezigbo enyi anyị. Ọ bụrụ na ị chọrọ nọru mgbe ebighi ebi vidiyo agbamakwụkwọ gị, ihe nkiri ahụ ị na-enweghị ike ịchọta n'ụlọ ahịa ọ bụla na usoro anụ ahụ, foto nke njem gị niile, vidiyo ọkacha mmasị gị… anyị ga-enwerịrị nnomi ndabere.
Ọ bụrụ na ọ dị n'ụdị ISO ka mma karịa nke ka mma, ebe usoro a, ịbụ otu ụdị nke ọdịnaya niile echekwara na usoro ahụ, anyị nwere ike mfe iweghachi ya na disk ọzọ, iji na-enwe ndabere mgbe niile.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ngwa na-enye gị ohere rụọ ọrụ na CD na DVD, otu ngwa kachasị mma dị ugbu a na ahịa bụ Daemon Ngwaọrụ, ngwa nke anyị nwere ike ibudata n'efu, mana nke ahụ gụnyere usoro adịghị ike ma ọ bụrụ na anyị emebighị ego mbụ.
Ike Daemon Ngwaọrụ
Tinye okwuntughe na onyonyo nke mepụtara site na ngwa ma obu ihe oyiyi ejiri me ngwa ndi ozo.
Ọ na-enye anyị a isi okwu na isi okwu, nke ikpeazụ a dị mma maka mgbe anyị ji obere arụ ọrụ na-arụ ọrụ.
Ọ na-enye anyị ohere ịrụ ọrụ ruo 4 dị iche iche mebere draịva.
Njikọ dakọtara EziCrypt
Njikọ dakọtara VHD
Dakọtara na ụdị ihe oyiyi: ISO, MDS, B5T, CDI, B6T, MDX, CDI, BIN / CUE, APE / CUE, FLAC / CUE n'etiti ndị ọzọ.
Biblioteca site na ebe anyi nwere ike inweta onyogho nile anyi kere ma obu ebe anyi edobeere na komputa anyi.
Kedu ihe anyị nwere ike iji Daemon Ngwaọrụ
Dịka m kwuru na ngalaba gara aga, Daemon Ngwaọrụ bụ otu n'ime ngwa zuru oke mgbe ị na-arụ ọrụ na faịlụ dị n'ụdị ISO. Agbanyeghị, na mgbakwunye na ịmepụta na iweghachite onyonyo n'ụdị a, ọ na-enyekwa anyị ohere ịrụ ọtụtụ ọrụ dịka:
Dezie ọdịnaya nke ihe oyiyi ISO
N'ụzọ dị otú a, anyị nwere ike tinye ma ọ bụ wepu faịlụ ọhụrụ echekwara na onyonyo ISO. Na mgbakwunye, ọ na-enye anyị ohere itinye paswọọdụ ma ọ bụrụ na anyị chọrọ igbochi ọdịnaya ahụ ejedebe na aka ọjọọ.
Ike Virtual Drive
Ọrụ a na-enye anyị ohere iji na ike mebere ike draịva, Ihe eji eme TrueCrypt na ụdị RAM (Random Access Memory) diski.
Onye mbido ISCSI
N'ihi ọrụ a, anyị nwere ike jikọọ na ngwá ọrụ iSCSI ma jiri onyonyo dịpụrụ adịpụ, draịvụ ike siri ike yana nkeji nchekwa dị ka a ga - asị na ha jikọtara na kọmputa anyị.
Otu ọrụ kachasị mma nke ngwa a bụ ohere nke ịnweta ọdịnaya echekwara na onyonyo n'ụdị anụ ahụ site na ekwentị mkpanaaka site na Catch.
Ọ bụrụ na anyị na-ejikarị arụ ọrụ na ụdị faịlụ a, anyị nwere nhọrọ nke iwebata ngwa a n'ime sistemụ arụmọrụ Windows, ka anyị nwee ike ịnweta nhọrọ niile ọ na-enye anyị site na menu ndị a na - egosipụta nke ọma mgbe anyị pịa bọtịnụ aka nri.
A afọ ole na ole gara aga, ndị dị na ngwa nwere ike nkewa site freeware o Shareware. E gosipụtara ngwa ngwa Freeware n'ụzọ zuru oke yana ngwa n'efu, nke anyị na-ezo aka na ya dị ka isi mepere emepe.
Ngwa Shareware dị ule ngwa na ha etinyeghị ọrụ ya niile ma ọ bụ na anyị nwere ike iji ha ụbọchị ole na ole ruo mgbe ngwa ahụ kwụsịrị ịrụ ọrụ ma ọ bụrụ na anyị anaghị akwụ ụgwọ.
Daemon Ngwaọrụ bụ ngwa dị otú ahụ. Ọ bụ eziokwu na anyị nwere ike budata Daemon Ngwaọrụ kpam kpam n'efu, mbipute a, emere baptism dika Lite, anyị na-ejedebe ọnụ ọgụgụ nke ọrụ dịnụ, yabụ belụsọ na ị kwụrụ ụgwọ maka ngwa ahụ, ị ​​gaghị enwe ike iji ya mee ihe ọ bụla.
Ọnụ nke ngwa Daemon Ngwaọrụ Pro bụ euro 64,99, ụgwọ nke anyị nwere ike ịtụle zuru oke ma ọ bụrụ na anyị ga-erite uru zuru oke nke ọrụ ọ na-enye anyị, ma na e nwere ọtụtụ.
O di nwute na nke a abughi ikpe, ya mere Site na Mobile Forum anyị anaghị akwado ịzụta, ebe obu na anyi puru ichota uzo ozo di nma mepere emepe.
Ihe ndi ozo di na Daemon Tools
Ọ bụrụ na mkpa gị gafere ike na-emeghe faịlụ na ISO format, otu n'ime ngwa kachasị mma dị WinCDEmu, ngwa nke mepere emepe, yabụ anyị nwere ike iji ya kpamkpam na enweghị mmachi.
WinCDEmu na-akwado faịlụ na nhazi ISO, CUE, NRG, MDS / MDF, CCD, IMG ... N'ime ndị ọzọ, ọ dakọtara na Windows XP, enwere nsụgharị a na-ebugharị (ọ dịghị mkpa iji wụnye ya na kọmputa ebe anyị ga-eji ya), ọ dakọtara na Blu-ray, DVD na CD draịva, ọ bụ sụgharịa Spanish na anyị anaghị enye dịghị mmachi mgbe na-eke mebere draịva.
Ọ bụrụ na ị chọrọ naanị rụọ ọrụ na faịlụ dị n'ụdị ISO, ị kwesịrị ị na-enye ngwa a na-agbalị ISODISK, ngwa zuru oke nke na-enye anyị ohere ịrịgo ihe oyiyi 20 ọnụ, tụgharịa DVD na CD gaa n'ụdị ISO ma dakọtara na Windows XP (chọrọ nchekwa 64 MB, Intel Pentium 166 MHz ma ọ bụ 10 MB nchekwa).
Dị ka ngwa gara aga, ISOBuddy naanị ya ga - enyere anyị aka iji ihe oyiyi ISO kee ihe mana ọ dakọtara na usoro GI, ISO, NRG, CDI, MDF, IMG, DVD, B5I, B6I, PDI, BIN, CCD, DMG na ndị ọzọ.
ISOBUddy bu ngwa anyi nwere ike budata n'efu, anaghị etinye ụdị mmachi ọ bụla n'ihe gbasara ọrụ ma na-enye anyị ọnụọgụ nhọrọ dị ukwuu mgbe ị na-eke faịlụ na usoro ISO.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ngwaọrụ ndị ọzọ » Etu ibudata Daemon Ngwaọrụ n'efu